iPow 10000E avy amin'ny Walio Electronics | Androidsis
iPow 10000E ny 10.000 mAh Walio PowerBank maivana indrindra eny an-tsena
Francisco Ruiz | | Fitaovana hafa, hevitra
Fahita amin'izao vanim-potoanan'ny finday avo lenta misy fakan-tsary mahavariana misy izao, izany mila takiana mihoatra ny indray mandeha isan'andro isika. Ambonin'ny zava-drehetra, ireo mpampiasa rehetra ireo, anisan'izany ny tenako manokana, izay tontolo andro miaraka amin'ny smartphone na tablette an-tànana ary manome cane mahatalanjona azy.
Eo no ilalaovana ilay mpanamboatra teknolojia espaniola Walio Eloectronics miaraka aminy bateria ivelany tsy misy zavatra hafa ary tsy latsa-danja 10.000 mAh hahafahana mameno ny findaintsika na aiza na aiza misy antsika ary isaky ny mila izany isika. Ny anaranao iPow 10000E ary avy eo manazava ny antsipiriany rehetra momba izany izahay Banky Herinaratra manaitra heverina ho iray amin'ny kely indrindra amin'ny lafiny refy, amin'ny tsena Espaniola iray manontolo.
Hanombohana dia lazao azy ireo fa ny famaranana ny iPow 10000E Izy ireo dia tena manana kalitao mampiseho antsika vatana mafy orina sy mahatohitra miaraka amin'izay, araka ny nolazaiko teo aloha, io dia iray amin'ireo Banky herinaratra kely kokoa, raha jerena ny fahafahan'ny enta-mavesany 10.000 Mah amin'ireo izay eo amin'ny tsena Espaniôla ankehitriny.
Anisan'ireo toetra tokony hasongadina, ilaina ny manonona azy mpisafidy fiampangana marani-tsaina izay hanitsy ny amperage famoahana, eo anelanelan'ny 1 amp sy 2 amps, mandeha ho azy tanteraka ary miankina amin'ny filan'ny batterie tianay hotratrarina. Misy koa a rafitra fiarovana hendry mba hisorohana ny karazana fahasimbana na amin'ny Banky Power ihany na amin'ny Smartphone na Tablet izay takianay.
El iPow 10000E Ohatrinona koa miaraka amin'ny jiro fampandrenesana efatra hampahafantarana antsika ny fibaikoana ny batterie, ny LED fampandrenesana tsirairay dia mifanaraka amin'ny sarany 25% na izay mitovy amin'ny 25000 mAh. Ary koa, amin'ny lafiny iray aminy dia misy jiro mahery vaika mahery izay mahatonga antsika hiasa jiro na jiro vonjy maika. Mba hampavitrika azy, ny sisa ataonao dia ny manindry ny bokotra Power na Power indroa misesy.
Farany, lazao azy ireo fa ireto 10.000 mAh avy amin'ny iPow 10000E, omeny ho an'ny sasany izy ireo fiampangana telo amin'ny smartphone rehetra tafiditra ao amin'ny Android avo lenta, Windows Phone na Apple iOS.
Farany lazao azy ireo fa mandritra ny fotoana voafetra izay andehanantsika afaka mahazo an'ity bateria azo esorina ity amin'ny vidiny ambany 34,99 Euros Raha tokony ho ny 39,99 Euros izay ny vidiny ofisialy sy ny vidiny izay lazaiko ao amin'ny fanadihadihana video ny vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » iPow 10000E ny 10.000 mAh Walio PowerBank maivana indrindra eny an-tsena
TWRP, ilay fanarenana nohavaozina quintessential dia havaozina amin'ny kinova 2.8.4